I-Odisha Tribal Tour- Iintlanga zeeNdwendwe zeNdwendwe eNdiya. Shayela ku-91-993.702-7574
Odisha Temples Tribal Tour
Ngaba uyazi, i-29% yabemi be-Odisha yintlanga? Ukuba ungomnye wabantu, abathanda ukuhlangana nabantu abatsha kunye nokufumanisa iinkcubeko ezintsha, i-Sand Pebbles 'Odisha Tribal Tour yindlela oya kuyo. Ngezizwe ezahlukeneyo ze-62 ukuyihlola, u-Odisha uhambo lohambo lujolise kwizithethe ezidala ubudala, isiko lendabuko kunye nemizana yabantu. Ukuphuma kwindlela engaqondakaliyo kwiindawo zeentlanga, kunye ne-Odisha Tribal Tour, enikezwa yi-Sand Pebbles kwaye ibe nombono osondeleyo kuluntu olude kunye namasiko. Ukuchitha ngokuhlwa, njengoko abantu besizwe badansa kwiingoma zeDhemsa bangaba ngamava okwenene. Unokuyonwabela ngeemarike zangeveki kwiidolophu kunye neOudisha Tribal Tour.
Yilungele ukuhamba eluhambweni, ngendlela ongaphaya kwindlela ocinga ngayo kwaye ukhangele inkcubeko kunye neendibano ezizizityebi ze-Odisha yamandulo kwaye ube nolwazi oluqhelekileyo nolunakulibaleka. Umngeni wakho kwi-adventure engeyikukunika ithuba lokuphila ngamava kuphela kodwa ube namava okufunda. I-Tribal Village Tour idibanisa imvelo, indawo, indawo, imikhosi, imidaniso, imicimbi, ubugcisa, izandla zobugcisa kunye neendaba. Ikoloni encinci yabantu, abaziwa ngokuba yizizwe bahlala benolwazi malunga nabantu basezidolophini, kwaye ngokufanayo.
Iintlanzi zeNtsantyamboI-Odisha Tribal Tour inikezela i-Odisha Tribal Tour Packages kunye ne-Odisha Village Tour eyokubeka kwihambo evelele.
Ikhowudi yoKhenketho: 002
Iimpawu ze-13 / iintsuku ze-14
USUKU 01: U-ARRIVAL
Ukufika kwi-Bhubaneshwar Airport / Isitishi seSitishi kunye nokuthunyelwa kwihotele. Ngomso emva kokuhlwaya kwiitempile zendawo - Lingaraja, Parsurameswar, Mukteshwar, Brahmeswara & Raja-Rani. Ngobusuku eBhubaneswar.
ISUKU 2: IBHUBANESWAR - IPIPILI - IPURI
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya ePuri ukuya kwiDhauli (i-Shanti Stupa), iHirapur (i-64 Yogini itempile), i-Pipli (i-Applic village village) kunye ne-Raghurajpur (ilali loludwe). Endleleni uye ujabulele i-Chita-imidwebo kwiindonga zezindlu. Ngobusuku ePuri.
USUKU 03: IPURI - KONARK - PURI
Ukutyelela kwasekuseni kweNkosi yaseJagannath, ithempeli laseGundicha kunye neLoknath Temple. Ngomso emva kokuhlwaya eThempeli le-Sun laseKonark (ebizwa ngokuba yi-Black Pagoda), iNtaba yaseCandrabhaga kunye neendawo zokuloba. Ngobusuku Puri.
USUKU 04: IPURI - CHILIKA LAKE - IGOPALPUR
Ngentsasa emva kokutya kwasekuseni ukuya eGopalpur ngeBarkul. I-Scenic Chilika iya kubonakala endleleni kufuphi neBarkul. Ukutyelela elwandle ukuze ubone abadobi beloba befuna i-prawns, i-mackerel kunye ne-crabs. Qhubela kuGopalpur. Ngobusuku kuGopalpur.
USUKU 05: IGOPALPUR - TAPTAPANI - RAYAGADA
Emva kokutya kwasekuseni kuRayagada ngokuya kwindlela yokutyelela entwasahlobo eshisayo e-Taptapani naseTibetan Settlement e-Chandragiri. Ngobusuku eRayagada.
USUKU 06: URAYAGADA - UKUSEBENZA - URAYAGADA
Emva kwesidlo sakusihlwa, tyelela i-Soura Tribal Market, uze ubuyele eRayagada. Ngobusuku eRayagada.
USUKU 07: URAYAGADA - KOTHAGARH
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya kwiindawo zeTumudibandha ukuya ku-Kutia Kondh Tribes. Ngexa bebuyela ekutyekeni kwabo kwiKotgarh. Endleleni, ukuba ixesha livumelekile, tyelela iDhokra Casting ne-Tribal Jewelery eyenza indawo. Ngobusuku eRayagada.
USUKU 08: URAYAGADA - JEYPORE
Ngentsasa emva kokutya kwasekuseni kuhambela imakethe yase-Dongria Kondh Tribal eCatikona uze uqhube ukuya eJepore uhambele ezimbalwa i-Desia Kondh kunye neentlanga ze-Mali endleleni. Ngobusuku kuJepore.
USUKU 09: JEYPORE
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya ku-Onukudelli ukutyelela i-market yeBonda Tribes ebalaseleyo kunye nokuvakashela i-Gadabas & Didayee Tribes enemibala. Ngobusuku kuJepore.
USUKU 10: JEYPORE - KUNDULI - JEYPORE
Ukusa kwasemini ukunikela ubungqina bemarike yemifuno ye-Sanaparoja kunye ne-Mali kwiveki enkulu kwi-Kundli 65 KMs ngaphandle kwe-Sunabeda (iyimakethi embala kakhulu). Emva koko uqhubekele kuJeypore ukuya eNkosini Jagannath Temple kunye neMarch Museum eKoraput. Ngobusuku kuJepore.
ISUKU 11: IJAYYORE - I-GUPTESWAR - IBALIGAON - JEYPORE
Emva kwesidlo sakusihlwa, ukuya eGupteswar ukutyelela i-Lord Shiva etempileni kunye neentlobo ezimbalwa zeDhruba. Emva koko iimarike zabo ngeveki eBaligaon. Ngobusuku kuJepore.
USUKU 12: JEYPORE - VISAKHAPATNAM
Emva kwesidlo sakusasa, thumela kuVisakhapatnam. Ngentambama ekhululekile elunxwemeni. Ngobusuku eVizag.
ISUKU 13: VISAKHAPATNAM
Emva kwesidlo sakusihlwa waya eTempile. Ukuphumla komhla wamahhala. Ngobusuku eVizag.
Usuku 14: ISEBE
Emva kwesidlo sasekuseni, udluliselwe kwi-Vizag Airport / iSitishi seSitimela ukuya phambili.
Ukuqinisekiswa :-( INKQUBO YOKUSUKA 1st APRIL - SEPTEMBA KA-30THO, UKUSUKA KWE-26TH OCT-14TH DEC 2018 NOKUSUKA KWI-16TH JAN KU-31ST MARCH 2019)
Indleko Ngomntu Ihotele yebhajethi Ihotele ephezulu Ihotele ye Deluxe Ihotele ehotele
02 Abantu 106500 111000 122000 138200
04 Abantu 71300 75900 86800 103000
06 Abantu 61700 62300 73300 89500
08 Abantu 67500 72300 83200 99400
10 Abantu 61300 65900 76800 93100
Umntu ongaphezulu olele ngebhedi 20350 25850 31350 45650
Ukuqinisekiswa :-( INKQUBO YOKUPHUMA KWI-OCTI YE-1ST - I-OCT YE-25TH & KUSUKA 15TH DEC 2018 KU-15TH JAN 2019)
02 Abantu 127800 133200 146400 165800
04 Abantu 85500 91000 104000 123600
06 Abantu 74000 74700 87900 107400
08 Abantu 81000 86700 99800 119000
10 Abantu 73500 79000 92000 112000
Umntu ongaphezulu olele ngebhedi 24000 31000 37600 54700
Ihotele kufuneka isebenzise: -
indawo Ihotele yebhajethi Ihotele eHlalayo Ihotele ye Deluxe Ihotele ehotele
EBhubaneswar Ihotele iSapphire Plaza / efanayo Ihotele La Franklin / efanayo Ihotele I-Crown Mayfair Lagoon
Puri Ihotele yaseNaren Palace / efanayo Ubukhosi / Ukuziphakamisa iAnanya / efanayo Hans Co Co Palm / efanayo Mayfair Waves
GOPALPUR Ihotele yeLwandle Panthnivas Swosti Palm Resort Mayfair Palm Beach
JEYPORE Sawubona Jeypore Sawubona Jeypore Sawubona Jeypore Sawubona Jeypore
RAYAGADA Sai ngamazwe Sai ngamazwe Sai ngamazwe Sai ngamazwe
1) Ukuba amagumbi awafumaneki kwiihotele ezikhankanywe ngasentla, siya kukunika iiferensi ezifanayo.
I-2: Kwihotele eRayagada & Jeypore ayikho i-deluxe nehotele yehotele. Kukho kuphela i-Standard kunye ne-budget category AC / Rooms Similar.
Izithuthi njengoko nganye kwinkqubo.
Yonke into, ukupaka kunye nezibonelelo zomqhubi.
Iirhafu eziphakathi kunye neentlawulo zemvume
02-03 Abantu Dzire
04 Abantu Etios
I-06 Abantu Innova
I-08-10 Abantu Abahambi beTempo
Ngobunye ubusuku ii-AC zokuhlala kwiBhubaneswar kunye nesidlo sasekuseni
Ubusuku obubini be-AC yokuhlala ePuri ngekusasa
Ngobunye ubusuku ii-AC zokuhlala kwiGopalpur kunye nesidlo sasekuseni
Ubusuku bobusuku be-AC yokuhlala eRayagada kunye nesidlo sasekuseni
Indawo yokuhlala yase-night ebusuku eJeypore kunye nesidlo sasekuseni
Ubusuku obubini be-AC yokuhlala kwiVishakhapatnam kunye nesidlo sasekuseni
Ukuhamba ngesikebhe eChilika ichibi iBarkul
Imirhumo yeNgqungquthela yamaNdiya kuphela.
Ukutya okuninzi okunjengokuhlwa kwasemini nesidlo sakusihlwa.
Iindleko ezinxulumene nobuntu kwimvelo
Ukuhamba ngeenqwelo zomoya / ukuhamba ngomzila xa kukho.
Nantoni na engakhankanyiweyo kwi-inclusions